Yiyiphi indlela enokufanelana ngayo?
IMathematika Amathuba kunye neMidlalo
Ukusasazwa okungafaniyo okusemgangathweni kukunye apho zonke iziganeko eziphambili kwisithuba sesampula zinethuba elilinganayo lokwenzeka. Ngenxa yoko, isithuba sesampuli esipheleleyo sesayizi, ubuninzi besiganeko esisisiseko esisenzeka sisi-1 / n . Ukusabalalisa okuqhelekileyo kuyaqhelekileyo kwizifundo zokuqala zokungenzeka. I- hertogram yale mpahla iya kubheka i-rectangular shape.
Omnye umzekelo owaziwayo wokusabalalisa umlinganiselo ofanayo unokufunyanwa xa kufakwa umgangatho .
Ukuba sicinga ukuba ukufa kulungile, ngoko ngamnye umacandelo obalwe enye ukuya ezintandathu unako ukulingana okulinganayo. Kukho iindlela ezintandathu, kwaye ngoko kwenzeka ukuba ezimbini zilungiswe yi-1/6. Ngokufanayo, amathuba okuba abathathu aqoqwe kwakhona nawo-1/6.
Omnye umzekelo oqhelekileyo uyimali efanelekileyo. Icala ngalinye leengqekembe, iintloko okanye imisila, linako ukulingana okulinganayo kokuhlahlela. Ngaloo ndlela inokwenzeka intloko ibe yi-1/2, kwaye inokwenzeka ukuba umsila u-1/2.
Ukuba sisusa inkolelo yokuba idayisi esisebenzisana nayo ayilungile, ukusabalalisa amathuba okunokwenzeka akusekho ifom. Umthwalo ofayo ufezekisa inombolo enye phezu kwabanye, kwaye kuya kuba lula ukubonisa le nombolo kunamanye amahlanu. Ukuba kukho nayiphi na umbuzo, ukuhlolwa okuphindaphindiweyo kuya kusinceda ukuba sinqume ukuba idayisi esilisebenzisayo iyalungile kwaye ukuba sinokuyifumanisa.
Ukuxhaswa kohlobo olufanayo
Amaxesha amaninzi, kwiimeko zehlabathi zangempela, kunokwenzeka ukucinga ukuba sisebenza kunye nokusabalalisa okufanayo, nangona oko kungenjalo kungenjalo.
Kufuneka silumke xa senza oku. Ukucinga okunjalo kufuneka kuqinisekiswe ngobungqina obunobungqina obucacileyo, kwaye kufuneka simele ngokucacileyo ukuba senza uqikelelo lwe-uniform distribution.
Ngomzekelo obalaseleyo, qwalasela imihla yokuzalwa. Izifundo zibonise ukuba imihla yokuzalwa ayifakwanga ngokufanayo kulo nyaka.
Ngenxa yeemeko ezahlukeneyo, ezinye iintsuku ziye zazalwa ngabantu abaninzi kunabanye. Nangona kunjalo, ulwahlulo ekuthandweni kwemini yokuzalwa aluvumelekanga ukuba ezininzi izicelo, ezinjengeengxaki zokuzalwa, zikhuselekile ukucinga ukuba zonke iintsuku zokuzalwa (ngaphandle kwelanga lokuhlaselwa ) zinokwenzeka ngokufanayo.
Ziziphi Iimeko Zokuba Kunokwenzeka?
Ixabiso elilindelweyo kwi-Chuck-Luck
Kutheni i-Zero Factorial Equal One?
Indlela yokubonakalisa uMgaqo wokuQinisekisa ngoNokwenzeka
Yiyiphi into engenanto engenayo kwi-Theory?
Uluphi uhlobo oluqhelekileyo lokuSasazwa kweBinomial?
Indlela yokusebenzisa umzobo womthi wokuba kwenzeka
Funda indlela yokuPhinda
Quiz Conversion Metric Quiz
Ukuba iClause Threads - Umqathango wesibini: Ungaphelelekanga + Umqathango
I-Jodi Picoult Movies
I-Crystal Frost Window Paint
Indlela yokudala nokuhlela imixholo echaphazelekayo
Indlela yokugqiba umyalelo weDlalo ngokuPhezulu kokuGcina
I-Fish Common Reef yaseFlorida neCaribbean
Iincwadi eziMnandi kwiNgcaciso yoMdlalo
Yayiyintoni enye iMeyi yeMeyi eChina?
Ixesha lokuThatyelwa kwabasetyhini
I-courir - ukuqhuba
IiKlasi ze-Ukulele zamahhala
Iprolepsis, okanye i-Rhetorical Expending
Yintoni Eyenzeka Ngobomi Bwenene Xa i-Mercury ibuyela kwi-Retrograde?
I-Afghanistan: Inyaniso kunye neMbali
Amakholwa aseMbhaptizi aseMzantsi
I-United States v. USusan B. Anthony - 1873